Dood-wadaag caalami ah oo loo yaqaan 'Cadastral Symposium' - Geofumadas
Luulyo, 2012 cadastre, Baridda CAD / GIS, Maamulka Land
Iyada oo ay iskaashanayaan iskaashatada Ururka Juquraafiyaasha Peru iyo UNIGIS, Geowebss wuxuu soo bandhigayaa dood cilmiyeedka «Xaaladda xaadirka ah ee xeeladaha dhaadheer iyo kumbuyuutarrada iyo telefishinka«, Kaas oo dhici doona Jimcaha 10-ka iyo Sabtida 11-ka Agoosto 2012. Dhacdada fool-ka-foolka ah ayaa lagu qaban doonaa Peru laakiin adeegsadayaasha ka socda adduunka oo dhan waxay awood u yeelan doonaan inay si muuqata uga qaybqaataan.
Waxay noogu muuqataa dadaal aad u wanaagsan, oo si fiican ula jaan qaadaya xilligii wanaagsanaa ee ay Peru la kulantay sannadihii la soo dhaafay arrimaha ku saabsan geospatial. Dalal badan oo Latin Amerika ah waxay fuliyaan hawlo isku mid ah, laakiin joogtayntoodu badanaa waxay xadidan tahay sinaan yar iyo isku xirnaanta dharka oo ay kujiraan shirkadaha gaarka loo leeyahay iyo hay'adaha dawliga ah iyo tacliinta.
Wadaagidda waayo-aragnimooyinka caalamiga ah waa istaraatiijiyad aad u wanaagsan oo lagu hormarinayo waxa aad haysato oo aad wax ka barato waxa dadka kale ku guuleysteen waana mid ka mid ah ujeedooyinka dhacdadan.
Ajandaha waxaa ka mid ah laba maalmood oo aad u xoog badan, taas oo ay mudan tahay inay ka soo qayb galaan xafiiska ama guriga iyada oo loo marayo barnaamijka dalxiiska:
Jimcaha, bandhigyada maxalliga ah ayaa lagu soo daray, iyada oo loo marayo qaab casriyeyn ah oo ay dhiirrigelisay dowladda Peru iyadoo loo marayo Sharciga Dastuurka ee Nidaamka Macluumaadka Hantida Qaranka ee Isku-dhafan. Hormarka teknolojiyadda iyo saldhigyada raadraaca joogtada ah ayaa sidoo kale lasoo bandhigi doonaa.
Kadib, qadada kadib, waayo-aragnimada Honduras waxaa lagu muujin doonaa habka tartiib-tartiib ah ee dhinacyada kala duwan ee cadawga ee horumarinta degmada.
08: 30 - 10: 00 Diiwaangelinta Caawinaada Wadahadalka Wadaagga
10: 00 - 10: 10 Booqashada dhacdada
Dean of College ee Geographers of Peru
10: 10 - 10: 50 Cadceedda madaniga ee maanta ee PERU.
Dhinaca dhismaha qaab cusub oo loogu talagalay diyaarinta, maamulka iyo maaraynta macluumaadka - Digital Cadastre
Maamulaha Submadka ee Cadastre - Degmada Miraflores
Wakiilka AMPE (Ururka degmooyinka Peru)
10: 50 - 11: 20 Cadastre Multipurpose Cadastre 28294 - SNCP - Peru
Xoghayihii hore ee farsamada SNCP - oo ah maamulaha Cadastre
11: 40 - 12: 20 Teknoolajiyada macluumaadka (IT) ee adeega Kaalmarka Peru
12: 20 - 13: 00 Geodesy Satellite ee Peru (Raadinta Joogtada Joogta ah)
Ing. Ruddy Reza. - Solutions RTK
14: 30 - 15: 10 Codsiga Qunyar socodka ah ee 'Cadastre' oo ujeedooyin badan u leh horumarinta degmada
Isku-duwaha Barnaamijka Xoojinta Degmada ee Honduras
15: 10 - 15: 20 Su'aalaha Wareega
Moisés Poyatos wuxuu soo bandhigi doonaa waaya-aragnimada iyo farsamada isagoo adeegsan doona sawirro la saxay, sidoo kale wuxuu ku saleysan yahay waayo-aragnimada Honduran ee mashruuca PROCORREDOR. Horay ayaan uga maqalnay Muuse hada kahor mawduuca gvSIG ee degmooyinka Guatemala.
Kadibna waxaa jira khibrad Peruvian / Talyaani ah oo ku saabsan maaraynta sawirada dayax gacmeedka; Machadka Lincoln wuxuu ku soo bandhigi doonaa mawduuca qiimeynta hantida iyo canshuurta waayo-aragnimada reer Uruguay iyo Bolivia oo ah mawduuca qorshaynta qorshaynta xoojinta degmada.
Waxaa sidoo kale xiiso leh, soo bandhigista Rafael Beltrán, Mashruuca MuNet Taasi waxay keentay in OAS laga dhigo dawlado badan oo Latin America ah oo ah jimicsi oo ay ku jiraan xulufo ESRI, Trimble iyo Stewart Solutions.
Ugu dambeyntiina, UNIGIS waxay sharxi doontaa sida habka loo marayo nidaamka caddaynta ee ka shaqeeya aagga Nidaamka Macluumaadka Geographic.
9: 20 - 10: 20 Xakamaynta ka qaybgalayaasha
10: 20 - 11: 00 Maareynta Dhulka, Sahan Cadcad ah ee Orthophoto
Khabiir ku takhasusay GIS iyo Qorshaynta Xuduudaha
11: 00 - 11: 40 Sawirada Satellite
11: 40 - 12: 10 Cadastre, Cadastre Valuation iyo Canshuur Hantiyeed - Urugay
Professor Lincoln Institute of Land Policy
12: 10 - 13: 00 Waxay qorshayn jireen saadka, howlaha maamulka iyo farsamada ee lagu taageerayo laguna xoojinayo degmada - Bolivia
14: 20 - 15: 00 Mashruuca Hawl-galka iyo Degmooyinka Transparent, MuNet Cadastre - Ururka Dawladaha Maraykanka-OEA
15: 00 - 15: 40 UNIGIS oo ku taal Latin America, Master Master Systems
Wakiilka UNIGIS ee Latin America
15: 40 - 15: 50 XIRIIR
Waxaad sidoo kale raaci kartaa dhacdada Facebook iyo LinkedIn
Post Previous" Hore Koorsada ArcGIS ayaa lagu dabaqay Sahaminta Macdanta
Post Next Ipaq PC-ga ee qaab-dhismeedka 'Semi-based' iyo Saldhigyada GuudNext »